ထိပ်တန်း3သေစေနိုင်သောအမှားများ Rebooters လုပ် - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
reboot လုပ်ပါအဆိုပါထိပ်တန်း3အမှား
ငါမုန်းတီးမယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တို့ထဲကတချို့ကိုငါအလင်းပေးရမယ် ဒီမှာရှိတဲ့လူအများစုက PMO ကိုဘယ်တော့မှအပြည့်အ ၀ မထွက်တော့ဘူး (သို့) ရက်ပေါင်း ၁၀၀ လောက်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ လူတွေဟာလှုံ့ဆော်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်ခက်ခဲပါတယ်။
မမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုအောင်မြင်စေချင်လို့ပါ။ ငါ Reuniting / YBOP ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကသုံးနှစ်ကျော်လာပြီး၊ ငါကတည်းက ၁ နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပါတယ် ဒီဖိုရမ် created. ငါကအားလုံးကိုမြင်ကြပြီ ငါဖတ်ပြီးပြီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို porn စွဲလမ်းနေပြီလို့မထင်ဘူး
ဂယ်ရီ Wilson နဲ့ Marnia ရော်ဘင်ဆင်ကဤလယ်ပြင်၌စစ်မှန်တဲ့ရှေ့ဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများမည်သို့သိပ္ပံနည်းကျနားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကမ္ဘာတဝှမ်းယောက်ျားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိသည်သောသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုငါမှအစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည်။
သို့သော်သိပ္ပံနည်းကျနားလည်မှုဒီစွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ခက်အချိန်ရုန်းကန်နေနှင့်ရှိခြင်း reboot ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်, အလုံအလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ငါနင့်ကိုလူတွေအကြောင်းပြောပြမယ်။ သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားအခြားတစ်နေရာရာမှာဖတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာန်းကျင်အလုံအလောက်အရေးပါမှုမပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဒီ dopamine အကြောင်း, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်, စိုစွတ်သောအိပ်မက်, etc, ED သွေးဆောင် porn အကြောင်းကို dopamine သိပ်စိုးရိမ်ပူပန်သို့သော်အမှန်တကယ်ကဒီစွဲရိုက်နှက်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်မလုံလောကျနေကြသည်။
ဒီအချည်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ လှုံ့ဆျောမှုယာယီဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်တက် pumped နှင့်လှုံ့ဆော်ရ, YouTube ပေါ်မှာတစ် Nike ကဘောလုံးစီးပွားဖြစ် watch, ပြီးတော့4ရက်အကြာတွင်ပြန်သွားကြသည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာမျှမကိုဆိုလိုသည်။
ငါယုံကြည်တယ်, ငါရဲ့နှလုံးသားအနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှ, ငါဒီမှာငါပြောပြမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးကျင့်သုံးသူတိုင်းဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းသွားမှာပါ။
သင်ပြုရန်ရှိသည်ဤသူအပေါင်းတို့သည်3အမှားတွေအောင်ရှောင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သင့်အချိန်ယူ ကျေးဇူးပြု. အမှန်တကယ်ကိုစုပ်ယူ သငျသညျအဘယျသို့လာမည့်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့ ဤပစ္စည်းပစ္စယများသည်သိသာထင်ရှားမှုမရှိသောကြောင့်လူများစွာသည်၎င်းကိုအထူးသတိမပြုမိကြပါ။ အောင်မြင်သော rebooters များသည်ဤချည်မျှင်မှအကျိုးများစွာရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုင်ပါ၊ အချိန်ယူပါ၊ ကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပါ။ rebooter လုပ်နိုင်သောအမှားသုံးခုကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူပြောပြပါမည်။
အမှား #1: Porn အသုံးပြုခြင်းမကောင်းပါ Feeling Stop မှ
ဒီအမှားမသိနေသောပြည်သူ့ porn ဖြတ်အလွန်ခက်ခဲအချိန်ရှိသည်သွားနေကြသည်။
သငျသညျအလုပျသို့မဟုတ်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုပါတယ်။ မင်းရဲ့မြည်းကိုတစ်နေ့လုံးဖိအားတွေပေးပြီးမင်းလာမယ့်နေ့တွေအတူတူပဲဆိုတာမင်းသိတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာကျင်မှုရှိတယ် သင်စိတ်ပိုင်းမောနေပြီ မင်းအပန်းဖြေအနားယူချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်သလဲ? porn Watch ။
သငျသညျတညဉ့်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့ထွက်သွားပါ။ သင်တကယ်နှစ်သက်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ရှိပြီးသူနှင့်စကားပြောရန်ကြိုးစားသော်လည်းသူမကသင့်အားလျစ်လျူရှုထားသည်။ သင်၏မိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး ကသူ၏ပြက်လုံးများနှင့်သူမကိုရယ်မောနေသည်။ မင်းမနာလိုဘူး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုပြောပြီးဒီအမျိုးသမီးကြီးကိုချဉ်းကပ်ပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်ကြ၏။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကတောင်မှ“ ငါနဲ့ဝေးဝေးနေ” လို့ပြောတယ်။ မင်းအိမ်ပြန်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်ရတယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ကအရမ်းစိတ်ပျက်တယ်။ လှပသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရနိုင်မလားဆိုတာစပြီးစတွေးမိတယ်။ မင်းခဏတာစိတ်ဓာတ်ကျတယ် နာပါတယ် ဒီခံစားချက်တွေကိုသင်လွတ်မြောက်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်သလဲ? porn Watch ။
မင်းကမနေ့ညကအပြင်ထွက်သွားတယ် သငျသညျပျော်စရာအများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့်ယခုသင်တစ် ဦး ကြောက်မက်ဘွယ်သော hangover နှင့်အတူထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။ သင့်မှာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ အစာအိမ်နာကျင်ခြင်းရှိသည်။ မင်းအာရုံစိုက်လို့မရဘူး၊ မင်းက Gatorade ကိုသောက်နေတယ်၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ခြင်းစို့။ သင်အနည်းဆုံးခဏတာအတွက်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုကိုရပ်တန့်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်သလဲ? porn Watch ။
သင်သည်သင်၏အိမ်၌ fuck ဆိုတဲ့အဖြစ်ပျင်းပါတယ်။ သင်နှင့်ပျင်းရိခြင်းတ ဦး တည်းဖြစ်လာသည်။ မင်းဘာမှစိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တောင်မကြည့်ဘူး။ ပျင်းခြင်း၊ ပျင်းခြင်းနှင့် ပို၍ ပျင်းခြင်း။ အဘယ်သူသည်ပျင်းခံစားရဖို့လိုလား? ဘယ်သူမှ အချိန်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြေး အဘယ်အရာမျှပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုသွားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းများမရှိပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖိုရမ်များကိုသင်လန်းဆန်းစေပြီးသင်၏စာမူများအားအသစ်ပြန်ကြားချက်အသစ်မရှိပါ။ လုပ်စရာဘာမှမရှိဘူး သငျသညျစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်နာမငြိမ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်သလဲ? porn Watch ။
သငျသညျ porn အားဖြင့်သင်တို့ကိုနာကျင်မှုနဲ့အဆင်မပြေခံစားရတိုင်းအချိန်ကိုယ့်ကိုကိုယ် medicating ရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ပျက်စရာ၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်း၊ ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ကာယနာကျင်မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ သူတို့ဘာတွေလဲသိလား သူတို့ခေါ်တာကိုမင်းသိလား
ပျောက်ဘဝကနေ run မထားပါနဲ့။ ကွာအဖြစ်မှန်ကနေ run မထားပါနဲ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ဤခြင်းကိုမနှစ်သက်ဟုခေါ်သည်။ ကွာနာကျင်မှုထဲကနေအပြေး။ ပျောက်အီကနေ running ။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုယာယီဖြစ်ကြသည်။ ပျင်း, စိတ်ဖိစီးမှု, Hangover ဆင်း feeling ။ သူတို့ကအားလုံးလွန်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ porn ၌ခိုလှုံယူပြီးပယ်သွားနာကျင်မှုများနှင့်အဆင်မပြေရာမှပြေးစောင့်ရှောက်လျှင်ထို့နောက်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောယောက်ျားဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်သည်အဘယ်သို့သောအရာတို့ကိုအသက်တာ၌ခက်ခဲတဲ့ရသည့်အခါလုပ်ဖို့သွားမည်နည်း သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဝှက်ထားမလား? စိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာ?
သငျသညျမိန်းကလေးငယ်များအပေါ်နှိပ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ကွောအများကြီးတက်ဖြစ်စေသောနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါသင်သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်သွားမည်နည်း ထွက်ပြေးသည်? ဆင်ခြေလုပ်ရမလား?
၂ နာရီလောက်လမ်းလျှောက်နေပြီးသင် fuck ဆိုတဲ့ဆာလောင်နေတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲ။ တိုင်ကြားပါသလား အတောမသတ်တံပိုးကိုရိုက်သလော
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်သင်ထင်သလောက်မလွယ်ကူကြောင်းသင်သိသောအခါသင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ အရှုံးပေးသည်? Junk food ကိုအရက်မူးနေသလား။
ကျနော်တို့ကနာကျင်မှုစိတ်သက်သာရာအဖြစ် porn သုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။
ကျနော်တို့ကနေ run, အဖြစ်မှန်ကိုမရင်ဆိုင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ငါဒီမှာပြောနေတာကိုနားလည်ပေးပါ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကသင်သည် porn ကိုလွတ်မြောက်ရန်အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်လိမ့်မည်။
ဂရုတစိုက် Read ဗုဒ္ဓ၏နှုတ်ကပါဌ်တော်များမှရရှိသောအောက်ပါစာသား:
စာသားငါ2(1) တွင်ရေးဆွဲဤဘာသာဂုဏ်ထူး၏ပထမဦးဆုံးနာကျင်ခံစားချက်တွေကိုဖို့တုံ့ပြန်မှုကိုဗဟိုပြု။ အဆိုပါ worldling နှင့်မြင့်မြတ်သောတပည့်အတွေ့အကြုံကိုနာကျင်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားချက်များကို, ဒါပေမဲ့သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောဤခံစားချက်များကိုတုံ့ပြန်နှစ်ဦးစလုံး။ အဆိုပါ worldling ခြင်းကိုမနှစ်သက်သူတို့နှင့်အတူရန်ဓာတ်ပြုပြီးထို့ကြောင့်အဆိုပါနာကျင်ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှုထိပ်ပေါ်လည်းနာကျင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေ့ကြုံ: ဝမ်းနည်းခြင်း, မကျေနပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲ။ ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုနှင့်အတူညှဉ်းဆဲအခါမွန်မြတ်တပည့်, ဝမ်းနည်းခြင်း, မကျေနပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲ, စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထိုကဲ့သို့သောခံစားမှုတည်၏။ ဒါဟာသာမန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုခှဲမခှာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောယူဆဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဗုဒ္ဓနှစ်ခုအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နယ်နိမိတ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သူကကိုယ်ထင်ရှားတည်ရှိမလွှဲမရှောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်အတူတက်ချည်နှောင်လျက်နေစဉ်တွင်, ထိုကဲ့သို့သောနာကျင်မှုကျနော်တို့လေ့ကတုံ့ပြန်ထားတဲ့နှင့်အတူဒုက္ခ, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, မကျေနပ်မှုများနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်မပေးလိုကြောင်းရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးကတဆင့်ကျနော်တို့သည်းခံခြင်းနှင့်ဥပေက္ခာသမ္အတူသတ္တိရှိရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့သတိနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားဖြင့်သာနာကျင်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အာရုံငါးပါးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုလိုကျလှနျးခွငျး၏စိတ်အာရုံထွေပြား Bing အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးရှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွောကျော်လွှားရန်လုံလောက်သောဉာဏ်ပညာကိုဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။
"ဟုအဆိုပါ uninstructed worldling နာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံရသောအခါဘုန်းကြီးများ, သူ sorrows ဝမျးနညျးနှင့်ညည်းတွား; သူသည်မိမိအမိနို့ရိုက်နှက်ငိုကြွေးနဲ့အိမ်တွေကိုသွားပြီးဖြစ်လာသည်။ သူကနှစ်ခုခံစားချက်တွေကို-တစ်ဦးကိုယ်ထင်ရှားတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတဦးတည်းခံစားရ၏။ သူတို့တစ်တွေ DART နှင့်အတူလူတဒဏ်ခတ်, အဲဒီနောက်လူကိုနှစ်ခုလှံလက်နက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံစားမှုခံစားရမယ်လို့နိုင်အောင်, တစ်စက္ကန့် DART နှင့်အတူချက်ချင်းနောက်မှသူ့ကိုဒဏ်ခတ်ဖို့ခဲ့ကြသည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါ uninstructed worldling နာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံရသောအခါဒါကြောင့်လည်းသူကနှစ်ခုခံစားချက်တွေကို-တစ်ဦးကိုယ်ထင်ရှားတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတဦးတည်းခံစားရ၏။
ထိုနေ့နာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံနေစဉ်တွင် "ဟုသူကမျက်နှာသို့ခြင်းကိုမနှစ်သက်အားကမ်းလှမ်း။ သူကနာကျင်ခံစားမှုဆီသို့ခြင်းကိုမနှစ်သက်အားကမ်းလှမ်းလာတဲ့အခါနာကျင်ခံစားမှုဆီသို့ aversion ဖို့နောက်ခံသဘောထားကိုကဒီနောက်ကွယ်မှတည်ရှိသည်။ နာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံနေစဉ်, သူကကာမဂုဏ်အပျော်အပါး၌မွေ့လျော်ရှာတတ်၏။ အဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြချက်သနည်း အဆိုပါ uninstructed worldling ကာမဂုဏ်အပျော်အပါးထက်အခြားနာကျင်ခံစားမှုကနေမဆိုထွက်ပေါက်သိမထားဘူးလို့ပဲ။ သူကကာမဂုဏ်အပျော်အပါး၌မွေ့လျော်ရှာကြံတဲ့အခါ, သာယာသောခံစားချက်အဘို့အကိလေသာစိတ်နောက်ခံသဘောထားကိုကဒီနောက်ကွယ်မှတည်ရှိသည်။ တကယ့်မူလအစနှင့်ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ခြင်း, ဆန္ဒပြည့်, အန္တရာယ်, ဤခံစားချက်များကို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်သကဲ့သို့သူနားလည်မထားဘူး။ သူသည်မသာယာသော-နာကျင်-မဟုတ်သလို-ခံစားချက်ကဒီနောက်ကွယ်မှတည်ရှိသည်ဖို့ကိစ်စတှငျအဝိဇ္ဇာမှနောက်ခံသဘောထားကိုဤအရာတို့ကိုနားမလညျပါဘူးအခါ။
သူသာယာသောခံစားချက်ခံစားရပါလျှင် "ဟုသူကပူးတွဲခံစားရ၏။ သူကတစ်ဦးနာကျင်ခံစားမှုခံစားရပါလျှင်သူကပူးတွဲခံစားရ၏။ သူသာယာသောမ-နာကျင်-မဟုတ်သလို-ခံစားမှုခံစားရပါလျှင်သူကပူးတွဲခံစားရ၏။ ဒီဘုန်းတော်ကြီးများ, မွေးဖွား, အိုမင်း, သေမင်းမှပူးတွဲပါသူတစ်ဦး uninstructed worldling ဟုခေါ်သည်; စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးနာကျင်မှု, စိတ်ပျက်အားငယ်စွာနဲ့စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်ပူးတွဲသူ, ဆငျးရဲဒုက်ခမှပူးတွဲပါသူဟုငါဆို၏။
"ဟုအဆိုပါညွှန်ကြားမြင့်မြတ်သောတပည့်တစ်ဦးနာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံရသောအခါဘုန်းကြီးများ, သူဝမ်းနည်းခြင်းတော်ကိုစိတ်မနာစေ, ဒါမှမဟုတ်ငိုကြွေးမ; သူသည်မိမိအမိနို့ရိုက်နှက်ငိုကြွေးအိမ်တွေကိုသွားပြီးဖြစ်လာမထားဘူး။ သူတဦးတည်းခံစားချက်-တစ်ဦးကိုယ်ထင်ရှားတဦးတည်းမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းတဦးတည်းခံစားရ၏။ သူတို့တစ်တွေ DART နှင့်အတူလူတဒဏ်ခတ်ဖို့, ဒါပေမယ့်လူကိုတစ်ဦးတည်းသာ DART ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံစားမှုခံစားရမယ်လို့ဒီတော့သူတို့တစ်စက္ကန့် DART နှင့်အတူချက်ချင်းနောက်မှသူ့ကိုဒဏ်ခတ်မဟုတ်ဘူးခဲ့ကြသည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါညွှန်ကြားမြင့်မြတ်သောတပည့်တစ်ဦးနာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံရသောအခါဒါကြောင့်လည်းသူကတဦးတည်းခံစားချက်-တစ်ဦးကိုယ်ထင်ရှားတဦးတည်းမဟုတ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတဦးတည်းခံစားရ၏။
ထိုနေ့နာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံနေစဉ်တွင် "ဟုသူကမျက်နှာသို့အဘယ်သူမျှမခြင်းကိုမနှစ်သက်အားကမ်းလှမ်း။ သူကနာကျင်ခံစားမှုဆီသို့မျှခြင်းကိုမနှစ်သက်အားကမ်းလှမ်းကတည်းကနာကျင်ခံစားမှုဆီသို့ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖို့နောက်ခံသဘောထားကိုကဒီနောက်ကွယ်မှမုသာမသုံးပါဘူး။ နာကျင်ခံစားမှုတွေ့ကြုံနေစဉ်, သူကကာမဂုဏ်အပျော်အပါး၌မွေ့လျော်မရှာပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြချက်သနည်း အဆိုပါညွှန်ကြားမြင့်မြတ်သောတပည့်အာရုံငါးပါးပျော်ရွှင်မှုထက်အခြားနာကျင်ခံစားမှုကနေတစ်ဦးလွတ်မြောက်၏သိတယ်လို့ပဲ။ သူကကာမဂုဏ်အပျော်အပါး၌မွေ့လျော်မရှာပါဘူးကတည်းကသာယာသောခံစားချက်အဘို့အတပ်မက်ဖို့နောက်ခံသဘောထားကိုကဒီနောက်ကွယ်မှမုသာမသုံးပါဘူး။ တကယ့်မူလအစနှင့်ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ခြင်း, ဆန္ဒပြည့်, အန္တရာယ်, ဤခံစားချက်များကို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်သကဲ့သို့သူနားလည်သည်။ သူသည်ဤအမှုအရာနားလည်ကတည်းကဖို့ကိစ်စတှငျအဝိဇ္ဇာမှနောက်ခံသဘောထားကိုသာယာသော-နာကျင်-မဟုတ်သလို-မခံစားချက်ကဒီနောက်ကွယ်မှမုသာမသုံးပါဘူး။
သူသာယာသောခံစားချက်ခံစားရပါလျှင် "ဟုသူက detach လုပ်လိုက်သောခံစားရပါတယ်။ သူကတစ်ဦးနာကျင်ခံစားမှုခံစားရပါလျှင်သူက detach လုပ်လိုက်သောခံစားရပါတယ်။ သူသာယာသောမ-နာကျင်-မဟုတ်သလို-ခံစားမှုခံစားရပါလျှင်သူက detach လုပ်လိုက်သောခံစားရပါတယ်။ ဒီဘုန်းတော်ကြီးများ, မွေးဖွား, အိုမင်းခြင်း, သေခြင်းမှ detach လုပ်လိုက်သောသူတစ်ဦးအရိယာတပည့်ကိုခေါ်လျက်ရှိ၏ စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးနာကျင်မှု, စိတ်ပျက်အားငယ်စွာနဲ့စိတ်ပျက်အားငယ်ထဲကနေ detach လုပ်လိုက်သောသူ, ဆင်းရဲမှ detach လုပ်လိုက်သောသူသည်ဟုငါဆို၏။
"ဒီဘုန်းကြီးတွေက, ဂုဏ်ထူး, ထိုမညီမျှမှု, ထိုညွှန်ကြားမြင့်မြတ်သောတပည့်တို့နှင့် uninstructed worldling အကြားခြားနားချက်ပါပဲ။ "
အမှား #2: ကိုယ်တွင်ခံခက်တိုင်းအချိန်ကိုသင် Relapse
အိုကေဒါကြောင့်သင်က "ပြန်လာ" ခဲ့သည်။
ငါ့ဂျာနယ်ဖတ်ပါ။ တခြားသူတွေပြောသလိုငါဟာ“ နာတာရှည်ရောဂါ” ဖြစ်တယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း၊ သူကနောက်တဖန်မယူနိုင်ခြင်းနှင့်တစ်နာရီကြာ porn session တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်လာတယ်။ သူကသူ့ဂျာနယ်ပေါ်ဖိုရမ်နှင့်ပို့စ်များကိုမှလာ။
"ငါသည်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦး fuck ဆိုတဲ့ pussy"
"ငါသည်ဤ shit ၏လုံလောက်သောရှိခဲ့ပါတယ်"
တစ်ခါတလေသူဒေါသထွက်တတ်တယ်။ တခါတရံသူကအပြစ်ရှိတယ်ခံစားရတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသူသည်စိတ်ဓာတ်ကျတတ်သည်။ သူသည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုအလွန်အလေးအနက်ထားသည်။ ထို့နောက်သူသည်သွားပြီးအမှားနံပါတ် ၁ ကိုကျူးလွန်မိသည်၊ ထို့နောက်သူသည်မကောင်းမှုကိုမခံစားရစေရန်တွန်းလှန်လိုက်ပြီးနောက်တွင်သူအားပိုမိုဆိုးရွားလာစေသည်။ သူကလုံးဝကုန်ခမ်းသည်အထိသူသည်မူးယစ်နေသည်။ ထို့နောက်သူသည်ထပ်မံ reboot လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ သူ၏အမှားကိုလုံးဝသတိမပြုမိဘဲဖြစ်နေသည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူသည်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာပြီးသူကိုယ်တိုင်ထပ်မံကြိုးစားကာဤသံသရာမှလွတ်မြောက်ရန်မတတ်နိုင်တော့ပါ။
နားထောင်၊ နောက်တစ်ခါပြန်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခဲယဉ်းပါနဲ့။ စိတ်အေးအေးထားပါ။ သင်၏“ relapse spreadsheet” ကိုဖွင့ ်၍ (လူတိုင်းကသင့်သင့်သည်ဟုယုံကြည်သည်) လက်ရှိနေ့စွဲကို X နှင့်အမှတ်အသားပြုပါ။ ထို့နောက်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအမြန်ဆုံးပြန်သွားပါ။ တတ်နိုင်သမျှသင်၏မူးရူးမှုကိုလျှော့ချပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမင်းဟာသုညသို့ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကလူတွေကိုအားပေးတဲ့နည်းလမ်းပဲ။ ၎င်းသည်သင်အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတစ်လလျှင် 3-4 ကြိမ်ကြည့်ရှုသူမှကြည့်လျှင်သူအောင်မြင်ပြီဖြစ်သည်။
သူလိုလူတစ်ယောက်ဟာသူပြန်ပေါ်လာတိုင်းသူ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ခက်ရတာလဲ။ ဒါဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ သူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းလျှောက်နေသောသန်းနှင့်ချီသောယောက်ျားများကိုရှေ့တွင်လမ်းလျှောက်နေသည်
သူလုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာတစ်လလျှင်ထပ်မံဖြစ်ပွားသည့်ပမာဏကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ငါ spreadsheet တစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ၎င်းသည်သူမည်မျှတိုးတက်နေသည်ကိုရှုထောင့်အချို့ပေးလိမ့်မည်။
အချိန်နှင့်အတူသူသည် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုက၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုဆုံးရှုံးကြောင်းတွေ့ရှပါလိမ့်မယ်။ relapsing ပြီးနောက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုပြန်ရယူခြင်းပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့။
သူက Fame ခန်းမထဲကိုဝင်မ ၀ င်ချင်ချင်ဖြစ်ချင်မှရှိမယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးမကြီးဘူး။ အဆိုပါစွဲသူ့ကိုမရှိထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်။
ပြီးတော့သင်ဟာဒီဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသင် porn ကိုစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားနေတာကမာနကြီးပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ရိုက်နှက်တာကိုရပ်တန့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲ။
အမှား #3: Porn အကဲခတ်မတွင်လွန်းအာရုံစိုက်
သင် porn မကြည့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင် porn ကိုစဉ်းစားနေတယ်။
နေသမျှကာလပတ်လုံး porn သငျ့စိတျထဲမှာသည်အတိုင်း, သင်သည်အမှုရောက်သောသွားခွင့်တွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ဂျာနယ်၏ပစ္စည်းပစ္စယများပေါ်တွင်တင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။porn ဖြတ်လုလင်ပျိုဟာရမ္မက်ဒါခွန်အားဖြစ်ကြ၏, ဒါကြောင့်ခက်ခဲပါ!"
ရုံ porn အကြောင်းကိုမေ့လျော့။ သင်၏အသက်တာအတွက် option ကိုအဖြစ်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြု။
အရေးပါသောပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တွင်သင်၏စိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်။ သင့်မိသားစု, သင့်အိပ်မက်တွေ, သင့်ကျန်းမာရေး, သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။
ရမ္မက်ထသောအခါသတိကသူတို့ကိုစောင့်နေကြလော့။ သူတို့ကိုစောငျ့ရှောကျ။ တုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ သူတို့ကိုဖိနှိပ်မထားပါနဲ့။ သူတို့ကိုပယ်တွန်းမထားပါနဲ့။
ချည်သို့ချိတ်ဆက် - reboot လုပ်ပါအဆိုပါထိပ်တန်း3အမှား